မြန်မာ့သတင်း ( 30 April 16 ) ﻿-​အင်း​လေး​ကန်​စပ် ​ဟို​တယ်​ဆောက်​မှု ​ဒေ​သ​ခံ​ရွာ​သား​များ ​ကန့်​ကွက် - ​အ​လုပ်​သ​မား​တွေ ​နေ​ပြည်​တော်​ကို ​ဆက်​လက်​ချီ​တက်​မယ် - ​မြန်​မာ​တွေ ​အေး​ဂျင့်​ခ ​မ​ကုန်​ဘဲ ​ထိုင်း​မှာ ​အ​လုပ်​လုပ်​နိုင်​မယ် - ​ရ​ခိုင်​ပြည်​နယ်​အ​စိုး​ရ​သစ်​ရဲ့ ​ရက် ၁​ဝ​ဝ ​စီ​မံ​ကိန်း ​စ​တင်	Read more	ပြည်ပ သတင်း
ပြည်ပသတင်း ( 30 April 16 ) ﻿-​​- ​ဦး​ခေါင်း ​အ​စား​ထိုး ​ကု​သ​မှု ​စမ်း​သပ်​မည် - Apple ​ကု​မၸ​ဏီ ​ရောင်း​အား ​ကျ​ဆင်း - ​ဖမ်း​ဆီး​ခံ ​ကန်​နို်င်​ငံ​သား​ကို ​မြောက်​ကို​ရီး​ယား ​ထောင်​ဒဏ် ​အ​မိန့်​ချ -​မြောက်​ကို​ရီး​ယား ​ဒုံး​ကျည် ​စမ်း​သပ်​မှု ​မ​အောင်​မြင်	Read more	Burma ​လား၊ Myanmar ​လား
သူ့အတွေးသူ့အမြင် ( 30 April 16 ) ﻿
တ​ချိန်​က Burma ​လို့​ခေါ်ခ့ဲ​တယ်။ ​ဒီ​က​နေ့​အ​ထိ ​ကု​လ​သ​မ​ဂ္ဂ​မှာ ​တ​ချို့ ​တ​ချို့ ​နိုင်​ငံ​တွေ​က Burma ​ဆို​တဲ့ ​အ​သုံး​အ​နှုံး​ကို ​သုံး​နေ​ကြ​တုန်း​ပေါ့​ဗျာ။ ​အဲ့​တော့ ​ဒီ​လို​အ​နေ​အ​ထား​မျိုး​မှာ ​ဗ​မာ​လား ​မြန်​မာ​လား ​ဆို​တဲ့ ​စ​ကား​လုံး​အ​သုံး​အ​နှုံး​ကို ​အ​ငြင်း​အ​ခုံ​လုပ်
​နေ​မယ့် ​အ​စား ​	​ကို​ရန်​နိုင်
Read more	​န၀​တ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး ​ဘယ်​ရောက်​နေ​လဲ
ဆောင်းပါး ( 30 April 16 ) ﻿
​ပ​တ္တ​မြား​များ​ကို ​အ​ရည်​အ​သွေး​အ​ပေါ်​လိုက်​၍ ​ပ​ထ​မ​တန်း​စား ​ခို​သွေး (Pigeon Blood)၊ ​ဒု​တိ​ယ​တန်း​စား ​ယုန်​သွေး (Rabbit Blood)၊ ​တ​တိ​ယ​တန်း ​ဘို​ကြိုက် (British Blood)၊ ​စ​တု​တ္ထ​တန်း ​လက်​ကောက်​စိ (Bracelet) ​နှင့် ​ပ​ဉ္စ​မ​တန်း​စား ​ကု​လား​ငို (Indian Cry) ​ဟူ​၍ ​ခဲွ​ခြား​ထား​လေ့​ရိှ​ပြီး ​န၀​တ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​မှာ ​ဒု​တိ​ယ​တန်း​နှင့် ​တ​တိ​ယ​တန်း​ကြား​ရိှ ​အ​မျိုး​အ​စား​မျိုး​ဖြစ်​ကြောင်း ​	​န​န္ဒ​မျိုး​ဆောင်
Read more	သ​မ္မ​တ​ဦး​ထင်​ကျော်​အ​တွက် ​သ​မ္မ​တ​အို​ဘား​မား​၏​ကြေ​ညာ​ချက်
ဒီမိုကရေစီ ရေးရာ ( 31 March 16 ) ﻿
​ဦး​ထင်​ကျော်​၏ ​သ​မ္မ​တ​ရာ​ထူး​တာ​ဝန် ​လွှဲ​ပြောင်း​ရ​ယူ​လက်​ခံ​ခြင်း​သည် ​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ ​
နည်း​လမ်း​တ​ကျ ​ရွေး​ကောက်​ တင်​မြှောက်​ခြင်း​ခံ​ရ​သော ​အ​ရပ်​သား ​ဦး​ဆောင်​သည့် ​အ​စိုး​ရ​ထံ​သို့ ​အ​သွင်​ကူး​ပြောင်း​သည့် ​
မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​၏ ​သ​မိုင်း​ဝင်​မှတ်​တိုင်​တစ်​ရပ်​ကို ​	ko Myo Aung
Read more	​ရန်​ကုန်​မြို့​ရဲ့ ​မြို့​နယ်​အ​မည်​တွေ ​ဘယ်​လို​ဖြစ်​လာ​သ​လဲ
သုတ ( 21 February 16 ) ﻿
​ဟိုး​တုန်း​က​တော့ ​ရန်​ကုန်​ဟာ ​ရွှေ​တိ​ဂုံ​ဘု​ရား​ကို ​ဗ​ဟို​ပြု​ထား​တဲ့ ​ငါး​ဖမ်း​ရွာ​လေး​တစ်​ရွာ​သာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​အေ​ဒီ ၆ ​ရာ​စု​က ​စ​လို့ ​မွန်​လူ​မျိုး​များ​က ​ဒ​ဂုံ ​အ​ဖြစ်​ပြောင်း​လဲ ​တည်​ထောင်​ခဲ့​ ကြ​ပါ​တယ်။ ​ဒ​ဂုံ ​ဆို​သည်​မှာ ​ဒ​ဂုင်​လွုင် ​ဟူ​သော ​ရွှေ​တိ​ဂုံ​ စေ​တီ​တော်​ကြီး​၏ ​ဘွဲ့​အ​မည်​မှ ​ဆင်း​သက်​လာ​ခဲ့​ကြောင်း ​သိ​ရ​ပါ​တယ်။ တင်​နိုင်​တိုး
Read more	​ဒေါက်​တာ​မောင်​မောင်​၏(တိုု ့​ပြည်​ထောင်​စုု​သ​မ္မ​တ​မြန်​မာ​နိုုင်​ငံ​တော်ဖွဲ ့​စည်း​အုုပ်​ချုပ်​ပုံု ​ဥ​ပ​ဒေ .- ၁၉၅၉ ​ခုု​နစ် )
အမှတ်တရ ကဏ္ဍ ( 13 March 16 ) ﻿
..၁၉၅၉ ​ခုု​နစ်..​ဗိုုလ်​နေ​ဝင်း ..​အိမ်​စောင့်​အ​စိုုး​ရ​ဆိုု​ပြီး..​အာ​ဏာ​ကိုု​တ​ရား​ဝင်​လွှဲ​ပြောင်း​ရ​ယူ​ထား​ချိန်​မှာ..​ဗိုုလ်​နေ​ဝင်း​က..​ဒေါက်​တာ​မောင်​မောင်​ကိုု ​ရေး​ခိုုင်း​တဲ့ ​အ​ခြေ​ခံ ​ဥ​ပ​ဒေ ​စာ​အုုပ်​လေး​ပါ	Billy H. Mackenzie
Read more	လက်​စ​သပ်​တော့ ​လူ​ရွေး​ဟောင်​တာ​ကိုးနှင့် -မြန်မာ ကာတွန်းများ
ကာတွန့် ( 22 February 16 ) ﻿
အပေါ်ပိုင်းကစားလို့ ရတယ်နှင့် -မြန်မာ ကာတွန်းများ	Read more	​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည် -အ​တွက် ​မြန်​မာ​ပြည်​တွင်းမှ ​အား​ပေး​စာ​တ​စောင်
ရသ ( 13 March 16 ) ﻿
​အာ​ဏာ​ရှင်​တွေ​မှာ ​ကိုယ့်​ဥ ​ကိုယ့်​အ​မျိုး ​မှ​ကိုယ်​ခင်​တတ်​တဲ့
​သူ​ခိုး​စိတ်​ပဲ​ရှိ​တယ် - ​လူ ​လူ​ချင်း ​ကိုယ်​ချင်း​စာ​စိတ် ​ရှိ​တဲ့ ​လူ့​န​လုံး​သား​မ​ပါ​ဘူး ​မ​ပါ​တဲ့​အ​ပြင်
​ဖက်​ဆစ်​အာ​ဏာ​ရှင်​ပီ​သ​စွာ ​မောင်​နှ​မ​အ​ရင်း​ချင်း ​ယုတ်​မာ​စွာ ​သွေး​ခွဲ​ထား​လို့ ​အ​မှု​တောင်​ဖြစ်​ကြ​တာ
​ခေါင်း​ဆောင်​ပြော​သ​လို ​လူ ​သာ​မန် ​ကျ​မ​တို့​က ​အ​မျိုး​သား​ရင်​ကြား​မ​စေ့​နိုင်​ဘူး	Ma Myint Marr
Read more	​တာ​ဝန်
အဖြူရောင် ဝိရောဓိ ( 29 March 16 ) ﻿
ရန်​ကုန်​မြို့​လည်​မှာ ​ဖြစ်​သွား​တဲ့ ​စွမ်း​အား​ရှင်​တွေ​ရဲ့ ​လက်​စွမ်း​ပြ​မှု​ကို ​ကြည့်​ပြီး ​စွမ်း​အား​ရှင်​တွေ​ရဲ့ ​ဘ​ဝ​ကို ​အ​မှန်​အ​တိုင်း
​ရိုက်​ထား​တဲ့ Documentary ​ကား​ကောင်း​ကောင်း​လေး ​ကြည့်​ချင်​လာ​တယ်။ VICE ​က​လွင့်​တတ်​တဲ့ Documentary ​ပုံ​စံ​မျိုး​ပေါ့။	​မျိုး​ဇေ​ယျာ ​ဦး
Read more	မြစ်​ဆုံ​ကိ​စ္စ ​တ​ရုတ်​အ​မြင်
အခွင့်အလမ်း ( 31 March 16 ) ﻿
​မြန်​မာ​အ​ကြောင်း ​နုား​လည်​တဲ့ ​တ​ရုတ်​မူ​ဝါ​ဒ ​ချ​မှတ်​သူ​တွေ​က​တော့ ​မြစ်​ဆုံ​စီ​မံ​ကိန်း ​ပြန်​စ​ဖို့ ​သိပ်​မ​ဖြစ်​နိုင်​ဘူး​ဆို​တာ​ကို ​ကောင်း​ကောင်း​သ​ဘော​ပေါက်​ကြ​ပါ​တယ်။ ​ဆို​တော့ ​မြန်​မာ​တွေ ​ဒီ​လောက် ​ခါး​သီး​နေ​တာ​ကို ​တ​ရုတ်​က ​ဘာ​ကြောင့်​တွန်း​နေ​ရ​သ​လဲ​လို့ ​မေး​စ​ရာ​ရှိ​ပါ​တယ်။ို	​ဦး​ကျော်​ဇံ​သာ
Read more	NLD ​အ​စိုး​ရ​သစ် ​အ​စ​ကောင်း​ခဲ့​ပြီ ​အ​နှောင်း​သေ​ချာ​ဖို့ ​ဝိုင်း​ကူ​ကြ​ဦး​စို့ နိုင်ငံရေးရင်ဖွင့်စကား ( 22 February 16 ) ﻿
``​ပြောင်း​လဲ​ချိန်​တန်​ပြီ´´​ဆို​တဲ့ ​ကြွေး​ကြော်​သံ​နဲ့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တ​ဝှမ်း​လုံး​ကို ​မဲ​ဆွယ်​စည်း​ရုံး​ခဲ့​တဲ့ NLD ​
အ​မျိုး​သား​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ​အ​ဖွဲ့​ချုပ်​ကို ​ရာ​စု​ဝက်​ကျော် ​စစ်​အာ​ဏာ​ရှင်​စ​နစ်​အောက်​မှာ ​အ​ဖိ​နှိပ်​ခံ​ခဲ့​ရ​တဲ့ ​ပြည်​သူ​
တစ်​ရပ်​လုံး​က ​အ​ပြောင်း​အ​လဲ​ကို ​တ​ကယ်​လို​ချင်​ကြ​လို့ ​ပုံ​အော​ပြီး ​မဲ​ပေး​ခဲ့​ကြ​တာ ​တောင်​ပြို ​ကမ်း​ပြို ​	​စိုင်း(​မန်း)
Read more	နေဝင်းတခေတ် သန်းရွှေတခေတ် သိန်းစိန်တခေတ် မြန်မာပြည်ကြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ
ရှုထောင့်သစ် ( 1 January 16 ) ﻿
သိန်းစိန်တခေတ် ဖြစ်လာရာမှ မိဘပြည်သူများခင်ဗျာပြောရင်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးသွားကာ ကြွေးတွေယူရင်း
မိဘပြည်သူများမှာ တစ်ယောက်ကို ကြွေးငါးသိန်းတင် လာပါတော့တယ်။ တိုင်းပြည်က ကျန်နေသေးသည့် အကြွင်း
အကျန်လေးများကို နည်းနည်းလေး မှမကျန်ရအောင် တရုပ်ကို လက်ညိုးထိုးရောင်းလို့	မင်းသုည(ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)
Read more	ရှင်သန်နေသော သေဆုံးခြင်း--
ကဗျာ ( 1 November 15 ) ﻿
စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲ ရှုံးကြည့်လိုက်---- ငသုန်
Read more	ဒီအစိုးရကို ၁၀ဝ မှာ ၉၉ ယောက်မကြိုက်ဘူး
ပြုံးတော်မူ ( 13 September 15 ) ﻿
"ဟေ့ အဒေါ်ကြီး ခင်ဗျားဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ?"
"ဘာပြောရမှာလဲ ... ဒီအစိုးရကို လူ တစ်ရာမှာ ကိုးဆယ့်ကိုးယောက်မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောနေတာအေ့ .. ရှင်းပြီလား"
"ဘွားတော် ပြောလေကဲလေပါလားဗျ။ ခင်ဗျားကို ဖမ်းချုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်"	ဦးအောင်ကြီး
Read more	နိူင်ငံရေးဖဲကစားတတ်တဲ့သူတွေနားလည်ကြပါလိမ့်မယ်
ပဲ့တင်သံ ( 20 December 15 ) ﻿
ဖားကန့်ဒေသကို တရုတ်ဘက်က မြေသယ်ကားကြီးတွေ အစီးရေထောင်နဲ့ချီ ဝင်ရောက် လာပြီး ကျောက်စိမ်းဗန်းမှောက်ကြတာကို မနေနိူင်တဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေက ဆန္ဒပြကန့်ကွက်တယ်...
ဦးတည်ချက်လေးနဲ့ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်တယ်... ဒါကို..KIA တပ်ရင်း ၆ က ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်
အမျိုးတူတိုင်းရင်းသား (၇)ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသတဲ့..	သားကြီး
Read more	ခေါင်းဆောင်တွေစေတနာမှန်ရင်
ပြည်ပမြေမှ မြန်မာများ ( 30 June 15 ) ﻿
တနှစ်တာပတ်လုံး အလုပ်တွေလုပ်ထားကြတာဆိုတော့ အားလပ်ရပ်တွေရှိရ
မယ်ဆိုပြီး တိုင်းပြည်ကို ကောင်းစားစေချင်တဲ့ စေတနာ ကောင်းတဲ့ခေါင်း
ဆောင်တွေ စနစ်တကျ ဥပဒေတွေထုတ် ဖန်တီးခဲ့ကြတော့ လူတိုင်းလူတိုင်း
နားချိန်မှာ နားကို နားရတယ်.	Aung Mrin Soe
Read more	တူတာတွေ
မြန်မာမှု မြန်မာ့ဓလေ့ ( 20 December 15 ) ﻿
ခုလက်ရှိစစ်အုပ်စုအခြေအနေမှာ ဟိုတုန်းကနဲ့ ကွဲလွဲတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လွှတ်တော်၊ ရွေးကောက်ပွဲ၊ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ(များ)ရှိနေတယ်။ မတူဘူး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလို့ ထင်ချင်စရာ ကောင်းတဲ့ အနေအထား
Read more	shwekayin
ပြည်သူ့စစ်သည်ရေးရာ ( 23 December 16 ) shwekayin
Read more	ဒီတစ်ခါ တိုင်းပြည်ခြောက်ထဲ မကျနိုင်တော့ဘူး
ပြည်သူတို့ ရင်ခုန်သံ ( 26 June 15 ) ﻿
ဒီပွဲမှာ လူထုအပေါ်သာ ပေါပေါတောတောနဲ့ စွာကျယ်ကျယ်- လုပ်ရဲတဲ့သူပဲရှိတယ်။ ဦးသန်းရွှေကို ဘယ်သူမှ မထိမဲ့မြင် မလုပ်ရဲကြဘူး။ သူကလဲ ဦးနေဝင်း
အမျိုးတွေနဲ့ ဦးခင်ညွန့်ကို ဖြောင်ပြထာတာက လက်သံ တော်တော်ပြောင် တယ်လေ။	Prodemo Aung Khin
Read more	(မဟန+ မဘသ)= စစ်အစိုးရ… ဖတ်သင့်တဲ့စာစု
(2June 15 ) ﻿
မ.ဘ.သ .ဟာ အမျိုးကိုစောင့်ဖို့အော်နေသော်ငြား လက်တွေ့မှာ လူထုရဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်က ရုန်းထမှုကိုတောင် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်နေတာကို အထင်အရှားမြင်လိုက်ရပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် မ.ဘ.သ.ဟာ နိုင်ငံ
ရေးအရ စစ်အာဏာရှင်ဒေါက်တိုင်အဖြစ် အသုံးတော်ခံဖို့ (အရှင်ထာဝရ)- ခေတ္တ နော်ဝေးနိူင်ငံ။
Read more	မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ ( 17 June 16 ) Read more	Other links